Huawei CEO dia mankasitraka antso iray avy amin'i Joe Biden | Androidsis
Nandritra ny fizotry ny fifidianana izay nitondra an'i Joe Biden ho filoham-pirenena amerikana, dia maro ny fampahalalam-baovao nilaza fa ny politika izay notanterahin'i Donald Trump niaraka tamin'ny orinasa sinoa afaka miova izy io. Na izany aza, araka ny nampahafantarinay anao andro vitsivitsy lasa izay, hitohy toy izao ity politika ity, farafaharatsiny mifandraika amin'ny Huawei.
Miaraka amin'i Huawei nanomboka tato ho ato Nanatevin-daharana i Xiaomi, na dia tsy misy fetra mitovy amin'ny Huawei aza, fa izy no dingana voalohany. Tao anatin'ny herintaona fotsiny ary noho ny fandraràn'ny orinasa amerikana tsy hanao varotra amin'i Huawei, ilay orinasa aziatika lasa mpanamboatra fahenina izay nivarotra finday avo lenta indrindra tamin'ny taona 2020.
Ao amin'ny 2020, Natokana ny voninahitra, Marika kely an'i Huawei hahafahany mankafy ny fankatoavan'ny besinimaro indray, handray ny tolotra Google indray, ary mety ho manaova vola manoloana ny fatiantoka ara-toekarena fa i Huawei dia tsy maintsy atrehana amin'izao fotoana izao noho ny veto an'ny governemanta Etazonia.
Manantena antso izy ireo
Ny CEO sy mpanorina ny Huawei, Ren Zhengfei, dia nanambara tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny South China Morning Post, fa tiany izahay Hanova lalana i Etazonia ary hanana politika misokatra kokoa manoloana ireo orinasa sinoa:
Ny orinasantsika dia tsy manana angovo hiditra amin'ity tadio ara-politika ity. Miezaka izahay mba hanao vokatra tsara. Manantena izahay fa ny governemanta amerikana dia afaka manana politikam-pisokafana misimisy kokoa ho an'ny tombotsoan'ny orinasa amerikana sy ny fampandrosoana ny toekarena amerikana.
Voalaza ao koa fa te-hahazo antso avy amin'i Joe Biden hiresaka momba ny fandraràn'i Huawei any Etazonia ary koa milaza fa tsy hivarotra ny fizarana findainy mihitsy ilay orinasa.
Mikasika ny teknolojia 5G novolavolain'ny orinasa dia milaza izy fa vonona ny hanao izany mizara loharano amin'ny orinasa amerikana hahafahan'izy ireo mifehy tanteraka ny asany, ny asany, ny fitantanana ...
Efa nilaza izahay teo aloha fa ny teknolojia 5G antsika dia azo hafindra amin'ny ankapobeny. Tsy ny zon'ny fampandrosoana ihany no ao anatin'izany, fa ny programa sy loharanom-pahalalana loharanom-pahalalana. Raha mila teknolojia chip i Amerika dia azontsika atao ny mamindra azy. Tso-po ny teninay (fa) tsy mbola nisy orinasa nifampiraharaha taminay hatreto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny talen'ny CEO an'ny Huawei dia mankasitraka ny antso nataon'i Joe Biden
Ny varotra TikTok amin'ny fivarotana Oracle, manelingelina i Biden
Nisoratana patanty mba hampidirina "mode mamo" amin'ny finday avo lenta